Izakhiwo zokwelapha zamademoni zasetshenziswa ngisho nalapho isayensi yezokwelapha imane engekho. Futhi kwakunamazolo - isisombululo esilula kakhulu sezinto eziwusizo zotshani - ikhemisi yaqala. Futhi nakuba imithi yesimanje ithatha ngamazolo, kungabaza, odokotela abaningi bayakuvuma ukuthi kuyisivikelo. Ukuphulukisa amanzi - amazolo kaNkulunkulu angasetshenziswa ekunakekeleni.
Ngokuvamile, ama-hydrotherapy amazolo alula kakhulu: ekuseni noma emva kwamabili ebusuku aya emasimini ngendwangu yelineni noma ikotini bese eqoqa ngamazolo. Bopha umzimba noma ingxenye yayo. Ukushisa kuvuselela ukujikeleza kwegazi, izitsha kuqala zilula kakhulu, bese zanda, futhi izinto ezizuzayo ezivela embetheni zidlula zibe ngegazi. Kuwusizo kakhulu ukuhamba ngesikhwama singenasibopho bese ushayela utshani ngezintende zezandla zakho, ukuvuselela amaphuzu azwelayo.
I-Rosa ingumphumela wokuphuza izidakamizwa zemvelo, ngaphandle kwalokho, ayibambeli emaqabunga angcolile, iqhubekela emhlabathini kanye nodaka. Ngakho isikhumba sizokondla emanzini ahlanzekile abamba izinto eziwusizo ezinotshani, ngoba amaqabunga adala isikhala esisodwa samanzi ngamazolo, lapho okuqukethwe kosawoti, ngokwemithetho ye-physics, kuvame ukuvumelanisa.
Kusasa kusihlwa ...
Kukholelwa ukuthi amazolo nesasa ebusuku - izakhiwo ezihluke kakhulu, ezincike emandleni okukhanya: ilanga nenyanga, ngokulandelana. Ngakho-ke, amazolo ekuseni avuleka elangeni, ngenxa yalokho kunezinyoni eziningi ezikhokhisayo ezikwazi ukulwa nokuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, ilanga londla amazolo emandla alo asebenzayo, ngakho-ke ukuthi amazolo amasa ayenhle ngempela ukukhulula ubuhlungu obukhulu futhi aphathe ukuvuvukala. Ngamazolo omusi, eqoqwe emva kwamabili, ugcwele izindleko zamathengi aphikisayo, alwela ama-radicals mahhala emzimbeni, asize ukuthola ibhalansi yangaphakathi futhi abhekane nokucindezeleka nezinkinga zokukhathazeka. Ngaphezu kwalokho, kuhle ukusebenzisa ama-wraps edoba kusihlwa ukuvimbela isifo senhliziyo, ukungasebenzi ngokocansi, izilonda zesisu.
Emithi yokwelapha, izindawo ezisebenzayo ziye zaqalwa ngokuhlola, umphumela onomphumela wokuthuthukisa impilo ezithombeni ezixhunywe nawo. Ekupheleni kwekhulu le-19, umtholampilo waseRussia uZakharin kanye nesiNgisi Ged ezindaweni ezizimele zesikhumba, "eziphethe" ezithombeni ezithile. Ngakho-ke imithi esemthethweni isiqinisekisile okuhlangenwe nakho kwabahlengikazi bendabuko, futhi izingxenye zibizwa ngeZakharin Ted.
• ukugoqa imilenze yakho uma unesifo esihlangene, ukukhulula izinhlungu zesifo se-rheumatological nokuvimbela izifo zesistimu ye-genitourinary;
• Gqoka izandla zakho uma unenkinga ngesimiso senhliziyo, i-arthritis;
• Gqoka ikhanda uma uhlushwa yi-dystonia yemifino-vascular, neuroses, wehlile i-libido, i-alopecia, noma i-migraines.
Bheka lokho okutshala amazolo eqoqa. Uma izitshalo ziphulukisa, khona-ke amazolo ayenesifo, uma izitshalo zinobuthi, ziyingozi, khona-ke lezi zinto zidlulisela emazolo.
Ukuhlolwa kwegazi jikelele: yini angayisho ngaye?
Uhlelo lwe-endocrine, umsebenzi we-ovarian
Imiphumela yomsindo nokudlidliza emzimbeni womuntu
Ukugoba komlenze ngesikhathi sokukhulelwa
Inkukhu shish kebab in soy marinade neminqumo
Isaladi nesibindi esibilisiwe kanye ukhukhamba okufakwe emanzini
Izembatho ezinhle 2017-2018: izitayela zamanje ezivela kubanikazi bezintandokazi, isithombe
Isaladi yonyaka omusha 2013
Ukudlwengula ngodlame - ubulili kanye nobuntombi kubhodlela elilodwa
Indlela yokukhetha izicathulo zomzimba zezingane
Amagciwane aqinile kusuka ekushiseni - i-troch
Indlela yokuvula ibhizinisi lakho lokuhweba
Kunconywa nini ukugijima lapho
Zrazy kusuka isitshalo seqanda
Ukufakiwe isithombe ekhaya
Ungayifaka kanjani imilenze yakho ngomshini?